Taariikhda My Butros » Helitaanka A fidiyoo Butros
Mar walba ee aad iska tagaan, haddii ay tahay ganacsiga ama raaxo, laga yaabaa in aad rabto in aad wax kirayso ah xayawaanka fadhiya inuu yimaado gurigaaga si aan u daryeela xayawaankaaga guriga. Adeegsanaya adeegyada fidiyoo xayawaanka xirfad u ogolaan doona xayawaanka joogo raaxo leh in uu guriga u gaar ah, ku siinayaa nabadda ee maskaxda og waxa uu amaan iyo in gacmaha awood, iyo mid halaajiya oo aad ka in ay ku tiirsan yihiin saaxiibo ama qaraabo isagoo. Ka hor inta aadan ku wareejiyo furayaasha iyo ruxruxaa macsalaameeyay Rover iyo qalafsaneyn inkastoo, qaado waqti aad iskaaga u baratid haya xayawaanka iyo adeegyada ay bixiyaan. Wareysi haya dhawr xayawaanka, hesho si ay u ogaadaan yara, iyo su'aalo waydiin. Raadi ku saabsan waayo-aragnimo, sida joogta ah ay soo booqan doonaa rabaayadda, booqasho muddo intee la soo dhaafay, waxa ay qaban doonaa halka la rabaayadda, how they’ll handle emergencies and fees. Waxa intaa dheer in macluumaad guud oo ku saabsan adeegyada ay, waxaad u baahan tihiin si ay u daboosho dhowr dhibcood aad u muhiim ah, sida hoos ku qoran.
– Caymiska iyo / ama lagala kulmo: Tani ma shilalka ka hortagi doonaa dhacaya laakiin waa adiga iyo qofka kuu haynaya xayawaanka mararka qaarkood dhanjafka wax ka difaaci doonaa dhacaan waa musiiba ah. Inta badan mulkiilayaal madax ku jiraan caymis, iyo adeegyo badan oo in la shaqaaleeyo qof haya xayawaanka wacdi iyo caymis. Waa fikrad fiican in aad weydiiso caddayn caymis.
– Qodobada degdegga ah Butros: Haddii xayawaanka xanuunsado marka aad iska tahay, waxa uu noqon doonaa mid muhiim u ah xayawaanka guriga kuugu haya in la ogaado waxa tallaabooyin lagu qaado haddii aad la gaari karaa. Isaga ama iyada waa in ay leeyihiin macluumaadka xiriirka dhakhtarka xayawaanka ee, iyo nooca daaweynta iyo / ama ka dhigan tahay inaad ku oggolaanayaa haddii aad karto in aan la soo xiriiro.
– Nidaamka degdegga ah ama fidiyoo Butros: Ask what measures will be taken if your pet sitter becomes ill and is unable to care for your pets if he or she is unable to get to your home due to inclement weather, ama haddii ay dhacdo masiibo dabiici ah.
– Ammaanka Key: Weydii sida ay muhiimka ah ee la aqoonsan doono iyo kaydiyaa. Furayaasha waa in aan lagu lifaaqo wax la magac ama cinwaan aad u saabsan, oo markaan la isticmaalayn, horseednimo ah ay waa in lagu hayaa ammaan ah in ammaan ah ama wax kale oo xero aamin qufulan. Ganacsiga xayawaanka fadhiya intooda badan ayaa sidoo kale bixin doonaa si aad muhiim u ah xayawaanka fadhiya mustaqbalka assignments.
– Heshiisyada iyo noocyo kale: U hubso in aad qof lagaga tegey xayawaanka aad ka heleysaa heshiis qoraal faahfaahinaya waxyaabaha sida taariikhaha, times, adeegyada ku heshiiyeen, nidaamka degdegga ah, ammaanka ee muhiimka ah, Heerarka, iwm.
– Tixraacyada: Weydiiso magacyada iyo macluumaadka lagaala soo xiriiri u ah macaamiisha yar. Qaado waqti ay ku hadlaan dadka iyo weydiiso oo ku saabsan khibradahooda iyo haddii ay mar kale kiraystaan ​​lahaa in si gaar ah kuugu haya xayawaanka. Fariisiya xayawaanka badan ayaa sidoo kale ku faraxsan yihiin inay bixiyaan tixraacyo ka xirfadlayaasha daryeelka xayawaanka kale sida xoolaha, groomers, ama tababarayaasha.
– Xasasiyadda arrimaha: U sheeg qof lagaga tegey xayawaanka la filayo ee wax dhibaatooyin caafimaad ah, arrimaha habdhaqanka, ama arrimo kale oo muhiim ah oo ku saabsan xayawaanka aad guriga. Aad Siinta aad kuu haya xayawaanka sida macluumaad badan sida karaa saabsan xayawaanka iyada u ogolaanayso in ay ku siiyaan daryeelka ugu fiican.
– Arrimaha Home: Sida arrimaha xayawaanka, iska hubso in aad qof lagaga tegey xayawaanka ee wax oddities ku saabsan gurigaaga ka dhalan kara inaad maqnaato (a toilet that overflows, albaabada in aadan si fiican u Awoodayn, alarmiga ammaanka, iwm).
Sababta oo ah xayawaanka fadhi waa adeeg shakhsi, adiga iyo xayawaanka u baahan tahay inaad si raaxo leh qofka idiin ku yeedhi gurigaaga galay. Raadi dareen xirfad la xiriiri shakhsi, hubi in aad xisaabta ku dareen mindhicirka aad galay, and observe your pet’s reaction to the pet sitter your interview. Iyada oo xoogaa yar ee diyaarinta iyo baaritaan, your pet will be able to stay safely in his own home while you’re away and will be there to eagerly greet you with love and affection when you return.